I-NOYB isola iGoogle ngokulandela umkhondo ngokungemthetho abasebenzisi be-Android | Kusuka kuLinux
UMaximillian Schrems, isishoshovu esivela e-Austria, ifake isikhalazo nge-Google ngokuphatha kwayo imininingwane yomuntu. Ngokuqondile, ihlasele okokuhlonza i-Google kwabakhangisi i-AAID (ID Yokukhangisa) oyifanise ne- "plate plate yedijithali."
Ngokusho kwakhe, i-AAID imane nje iyilandelela ku-smartphone esikhundleni sekhukhi kusiphequluli sewebhu. UMaximillian Schrems, ophethe iqembu lobumfihlo noyb.eu, waduma ekulweni kwakhe nemikhiqizo emikhulu yezobuchwepheshe.
I-Google ichaze okokuhlonza okuhlukile kunqubomgomo yakho yobumfihlo njengo:
“Uchungechunge lwezinhlamvu olukhomba ngokukhethekile isiphequluli, uhlelo lokusebenza noma idivayisi… Kuzingxenyekazi ezingezona iziphequluli, okokuhlonza okuhlukile kuvumela ukuqashelwa kwedivayisi ethile noma uhlelo lokusebenza olufakwe kuleyo divayisi. Isibonelo, isikhombi sokukhangisa sisetshenziselwa ukubonisa izikhangiso ezihambisanayo kumadivayisi we-Android… «
I-AAID ifana kakhulu nesikhombi sokulandelela okukhona kukhukhi lokuzulazula: I-Google kanye nabantu besithathu (njengabahlinzeki bohlelo lokusebenza) bangafinyelela kulwazi olugcinwe kuzinto zokusebenza zomsebenzisi. Lokhu ingasetshenziselwa ukunquma okuncamelayo komsebenzisi kuhlotshaniswa ne-AAID yakho nokubonisa izikhangiso ezifanele kwezinye izinhlelo noma kumakhasi ewebhu angahlobene.
Ukuze usebenzise imisebenzi ehlukahlukene yohlelo lokusebenza lwe-Android, ummangali kwakudingeka amukele imigomo yokusetshenziswa kwamasevisi we-Google Play nemithetho yobumfihlo ye-Google.
Ngokuzenzakalelayo, isistimu yokusebenza ye-Android, eyakhiwe nge "Google Play Services Toolkit", ihlobanisa ngokuzenzakalela idivayisi ngayinye ye-Android, kufaka phakathi eyommangali, nochungechunge lwezinhlamvu ezaziwa njenge-ID Yokukhangisa ("AAID").
Esikhalazo esifakwe, iqembu lobumfihlo likaSchrems uNoyb waphikisa ngokuthi ngokwakha nokugcina la makhodi ngaphandle kokuthola imvume yomsebenzisi ecacile, iGoogle ibibandakanyeka "emisebenzini engekho emthethweni ephula imithetho yobumfihlo ye-EU."
Empeleni, i-AAID "ipuleti lelayisense ledijithali." Ukuhamba ngakunye komsebenzisi kungaxhunyaniswa nale "plate plate" futhi kusetshenziselwe ukwakha iphrofayli mayelana nomsebenzisi, izintandokazi zakhe nokuziphatha kwabo. Le phrofayela nokuncamelayo kungasetshenziswa ekukhangiseni okuqondisiwe, ukuthenga ngaphakathi nohlelo, ukukhushulwa, njll. Uma kuqhathaniswa nezilandeleli zendabuko ku-Intanethi, i-AAID imane nje iyisilandeli ocingweni kunokuba ikhukhi kusiphequluli sewebhu.
UNoyb unxuse ukuba kwenziwe uphenyo ngemikhuba yokulandelela yakwaGoogle futhi iphoqa inkampani ukuthi ithobele imithetho yobumfihlo. Uthe kufanele inhlawulo ifakwe ku-tech giant uma i-watchdog ithola ubufakazi bokwenza okungalungile.
Ngokusho kwakhe, lesi sikhombi esibizwa nge-AAID (Okokuhlonza Ukukhangisa kwe-Android) Ivumela i-Google nezinkampani ezivela eceleni ukuthi zilandele abantu ukusungula iphrofayili ephelele yokukhangisa. Kodwa-ke, ngokohlaka lwezomthetho lwaseYurophu, ukusebenza okunjalo kudinga imvume yomuntu ngamunye ngaphambi kokwenza lokho kuhlolwa, imvume i-Google engayiceli, ngokusho kukaSchrems. Lokhu okwamuva akususelwa kuMthethonqubo Wokuvikelwa Kwemininingwane Jikelele (i-RGPD), kepha kumyalelo kaJulayi 12, 2002 wokuvikelwa kobumfihlo emkhakheni wezokuxhumana ngogesi, izinhlinzeko zazo ezifakiwe eMthethweni Wezokuvikela wedatha.
"Ngalezi zikhombi ezifihliwe ocingweni lwakho, i-Google kanye nabantu besithathu bangalandelela abasebenzisi ngaphandle kwemvume yabo," kusho uStefano Rossetti, ongummeli wobumfihlo kaNoyb. "Kufana nokuba nempuphu ezandleni nasezinyaweni, ushiye umkhondo wakho konke okwenzayo efonini yakho, noma ngabe uswayiphe kwesokunxele noma kwesokudla kule ngoma oyilandile."
I-Google, enabasebenzisi abalinganiselwa ezigidini ezingama-300 be-Android eYurophu, ibhekene nesikhalazo esehlukile esivela kuNoyb kuya egunyeni lokuvikela idatha lase-Austrian, liphikisa ikakhulukazi ukuthi abasebenzisi abakwazi ukususa ukuhlonza kumadivayisi wabo we-Android.
Ngokuya ngabantu abajwayelene nalesi sikhalazo, UNoyb ukhethe ukuya kumlawuli waseFrance, ngoba uhlelo lwayo lwezomthetho lwanele ukuphatha izikhalazo ngaphansi komyalelo we-European ePrivacy. UNoyb ubekhathazekile nangokusebenza kwesiphathimandla sokuvikela ukwaziswa kwedatha yase-Ireland ngemuva kokuthi amazwe amaningi angamalungu, kubandakanya neJalimane, eyisola ngokuphoqelela ukusebenza kancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-NOYB isola iGoogle ngokulandela umkhondo ngokungemthetho abasebenzisi be-Android
Izimali ze-Cryptocurrency Wallet: Ukufaka nokusetshenziswa ku-Linux - Ingxenye 2